Quibi Anorega Zvimwe Zvinotyisa Zvikamu Zviderere paYouTube zveVataridzi veTV
musha Horror Varaidzo Nhau Quibi Anorega Zvimwe Zvinotyisa Zvikamu Zviderere paYouTube zveVataridzi veTV
by Timothy Rawles April 30, 2020 1,085 maonero
Quibi iri kugadzirira kuvhara yayo yakasarudzika kupihwa kwemahara kwemwedzi mitatu nguva yekuyedzwa uye iri kupa vangangove vanyorese kuona zvishoma pane zvavo zvirimo vasina kutora iyo app.
Iyo coronavirus denda inogona kunge yakatadzisa zvakanyanya modhi yemhando Quibi yaive kuyedza kubuda. Iyo ipfupi-fomu yemukati chikuva ine mamwe emazita makuru eHollywood anopa mapurojekiti, asi nevanhu vakaiswa pamba zvinhu zvinotakurika zvebasa zvinogona kunge zvisina kuwana kufarira kukuru nevanyori.
Kutanga-kuburitsa kwakaburitsa zvikamu zve Wakawanda Wengozi Game, The Stranger uye Dummy pane yayo YouTube peji iyo yanga ichinyanya kushandiswa seye teaser uye tirera katarogu.
Kunyangwe pachikuva paine mazita ekuremekedza ari episodic, ivo vari kungopa vateereri chitsauko chekutanga uye vachikumbira kuti vanyore kuti vaone zvese.
Vanotyisa vateveri vangangoda kuongorora Iye mweni, inosanganisirwa mukutarisa kweYouTube.
Heano kuputsika kwechirongwa:
“Mutyairi wechidiki anozvitutumadza akakandwa muchiroto chake chakaipisisa apo mutyairi asinganzwisisike wemuHollywood Hills anopinda mumotokari yake. Kutyaira kwake kunotyisa nekumisa moyo naThe Stranger kunoitika pamusoro peawa gumi nembiri anotyisa apo achifamba pasi pevhu peLos Angeles mumutambo unotyisa wemusana nekatsi. ”
wo Wakawanda Wengozi Game inogona kuwedzera kufarira kwako:
"Apererwa kuti achengete mudzimai wake ane nhumbu chirwere chisati chamubata, Dodge Maynard anobvuma kupihwa mukana wekutamba mutambo unouraya apo paanozowana kuti haasi muvhimi - asi mhuka."